ပေါက်ကွဲမှုနှင့် တိုက်စားမှုဒဏ်ခံ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သူများ - China Explosion & Corrosion-proof Electrical Appliances Suppliers & Factory
BF28158-S series သည် Explosionerosion-proof operation post ဖြစ်သည်။
1. ၎င်းကို မီးလောင်လွယ်ပြီး ပေါက်ကွဲလွယ်သော ဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြပြီး ရေနံထုတ်ယူခြင်း၊ သန့်စင်ခြင်း၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ ကမ်းလွန်ဆီ
ပလပ်ဖောင်း၊ ရေနံတင်သင်္ဘော စသည်တို့ကို စစ်ဘက်လုပ်ငန်း၊ ဆိပ်ကမ်း၊ စပါးသိုလှောင်မှုနှင့် သတ္တုလုပ်ငန်းစသည့် မီးလောင်လွယ်သော ဖုန်မှုန့်နေရာများတွင်လည်း အသုံးပြုသည်။
LA5821 စီးရီး ပေါက်ကွဲ-တိုက်စား-ဒဏ်ခံ ထိန်းချုပ်ခလုတ်
7. ထိန်းချုပ်ပတ်လမ်းရှိ သေးငယ်သော လျှပ်စီးပတ်လမ်းကို ဖြတ်ရန် သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ရန် အသုံးပြုပြီး contactors နှင့် relays များကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ယူနစ်များကို ထိန်းချုပ်ရန် ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ပါ။
BF28159-S စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော အလင်းရောင် (ပါဝါ) ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာ
7. အလင်းရောင် သို့မဟုတ် ဓာတ်အားလိုင်းများအတွက် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ အဖွင့်/အပိတ် ထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးမှုကို စစ်ဆေးပါ။
BF28158-S စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာ
7. ထိန်းချုပ်ထားသော မော်တာအနီးတစ်ဝိုက်ရှိ မော်တာအများအပြားကို အကွာအဝေးတွင်ဖြစ်စေ လျှပ်စစ်သံလိုက်ကိရိယာကို သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ထိန်းချုပ်ပြီး လျှပ်စစ်ကိရိယာများနှင့် အချက်ပြမီးများမှတစ်ဆင့် ထိန်းချုပ်ထားသော ဆားကစ်၏လည်ပတ်မှုကို စောင့်ကြည့်လေ့လာပါ။
BF28159-S စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ဆားကစ် ဘရိတ်ကာ
7. လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် ကိရိယာနှင့် မီးချောင်းပတ်လမ်းအဖြစ်၊ ၎င်းကို လျှပ်စစ်မော်တာများအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။မကြာခဏ စတင်ခြင်းနှင့် ဝန်ပိုခြင်း၊ မော်တာ၏ ဝါယာရှော့နှင့် ဗို့အားလျော့နည်းခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။
BJH8030/စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုနှင့် တိုက်စားမှုဒဏ်ခံ လမ်းဆုံသေတ္တာ
7. အလင်းရောင်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ထိန်းချုပ်လိုင်းများ၊ တယ်လီဖုန်းလိုင်းများ စသည်တို့ကို ချိတ်ဆက်ရန် အသုံးပြုသည်။
8050/11 စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုနှင့် တိုက်စားမှုဒဏ်ခံ မာစတာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ
7. အမိန့်ပေးပို့ခြင်းနှင့် အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ခြင်းအဖြစ် အသုံးပြုသည်။
BF28158-S စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုနှင့် တိုက်စားမှုဒဏ်ခံ လမ်းဆုံဘုတ်